၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းများမှကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှော်လင့်ရသနည်း။ | Androidsis
ဒါဟာအချက်ကိုဖြစ်ပါတယ် စမတ်ဖုန်းတွေဟာအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတယ်။ နေ့စဉ်နီးပါးကျွန်ုပ်တို့သည်မော်ဒယ်အသစ်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များနှင့်တွေ့ကြုံရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်သည် စမတ်ဖုန်းတွေဟာပိုများလာပြီးတခြားသူတွေနဲ့တူလာတယ်။ အနည်းဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်တစ်ယောက်ချင်းစီကကျွန်ုပ်တို့အားဘာတွေကမ်းလှမ်းနိုင်သလဲ။
ထိုသို့ရှင်းပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်ပ္ပံရှိပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုပို။ ပို။ ချောသို့မဟုတ်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများအားဖြင့်သတ်မှတ်ကြပေမယ့်။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက် high-end device မှကမ်းလှမ်းသောအင်္ဂါရပ်အများစုကိုလည်းပိုမိုကျိုးနွံသော devices များဖြင့်လည်းကမ်းလှမ်းသည်.
1 high-end သည်အခြေခံစမတ်ဖုန်းနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
2 လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်လက်ရှိတစ်ခုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ဒီနှစ် ၂၀၁၆ သည်လက်ဗွေဖတ်သူများ၏နှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသီးသန့်စမတ်ဖုန်းများသည်စျေးကွက်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤအသစ်အဆန်းများကိုအသုံးအများဆုံးဖုန်းများကလက်ခံလာကြသည်။ ဒီနှစ် အားလုံးသောအလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်သစ်အားလုံးတွင်လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ high-end မှသီးသန့်ထွက်စတင်ခဲ့တစ်ခုခု။
သို့သော်ဤ "အသစ်အဆန်း" အပြင်၊ စမတ်ဖုန်းလောကမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအံ့အားသင့်စရာများနည်းပါးလာသည်။ ဒါဟာအသစ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ပို။ ပို။ ခက်ခဲသည်မှန်သည်။ AND မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစမတ်ဖုန်းများပေါ်ရှိဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည်သူတို့၏မရှိခြင်းကြောင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည်.
ငါတို့ကိုထပ်တူထပ်မျှပေးကမ်းနေသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားအသုံးပြုနေကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် ram memory သို့မဟုတ် megapixels များကိုသတင်းအဖြစ်ပိုမိုမျိုချရမည်နည်း။.
၂၀၁၇ ခုနှစ်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားခုန်ပျံကျော်လွှားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ နိမ့်ဆုံးအဖြစ် နောက်ဆုံးတော့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုခေါက်ထားသည့်မျက်နှာပြင်နှင့်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ဤ terminal အမျိုးအစားသည်ကုန်ဆုံးမည်လားဆိုသည်ကိုမသိရှိရသေးဘဲစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုသို့မိမိကိုယ်ကိုနုတ်ထွက်ရမည်လော။
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်လက်ရှိတစ်ခုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ထုတ်လုပ်သူအားလုံးကဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်သုတေသနတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဟုဆိုကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုကနေကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုပူဇော်နိုင်ပါလိမ့်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်က ၂၀၁၆ မှစမတ်ဖုန်းနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွာခြားမှုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝကွာခြားမှုများရှိနေသေးသည်.
ထိုသို့သံသယမရှိပါ သိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။ Resolution ပိုများလာပြီးအရွယ်အစားလည်းတိုးလာသည်။ ဒီဇိုင်းကိုလည်းအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယနေ့အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအဖုများနှင့်ခြစ်ရာများပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ထိုအအတူတူပင်အရာသည်လက်ရှိအကြားဖြစ်ပျက် ယူရို ၇၀၀ ဖုန်းနှင့်ယူရို ၂၀၀ တန်။ ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံး အသုံးပြုသူကိုလက်တွေ့ကျကျအတူတူပင်ကိုဆက်ကပ်။ ခြားနားချက်က နှစ် ဦး စလုံးရှိသည်ထက်ပိုစျေးကြီးကမ်းလှမ်းမှု။ ဈေးသက်သာသည့်စမတ်ဖုန်းတွင်ဈေးအပေါဆုံးသောအရာများရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဈေးကြီးတဲ့သူတွေကတော့ကင်မရာ resolution၊ ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution၊ ပိုမြင့်တဲ့ဘက်ထရီ၊
တစ်ခုခု နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးကြီးမားသောကုမ္ပဏီများကြားတွင်အနည်းဆုံးပြောင်းလဲလာခဲ့သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲငါးရက်အထိကြာနိုင်သည့်ထိုမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိဆဲဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားဖူးတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထက်အလွန်မြင့်မားသည်။ ငါတို့လည်းထည့်လျှင် ကြီးမားသောဖန်သားပြင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် စားသုံးမှုပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်ဘက်ထရီများသည်ကြာရှည်ခံသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဒီဆင်ခြေဘယ်လောက်ကြာမလဲ.
အများအပြားမော်ဒယ်များရှိပါတယ် Xiaomi လိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကပိုပြီးစွမ်းအားကြီးတဲ့ဘက်ထရီတွေကိုခိုင်မာစွာရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ နှင့် ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် devices များ၏အရွယ်အစားကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄၀၀၀ mAh ထက်ကျော်လွန်သောစမတ်ဖုန်းများကိုတွေ့ရှိပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ထက်ဝက်ခန့်ရှိသောအခြားသူများထက်ပိုမိုပါးလွှာသည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, ဤနှစ်သစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည်များပြားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှတ်သည်။ ငါတို့လိုချင်တယ် အမှတ်တံဆိပ်တွေကဘက်ထရီကိုထည့်တယ် ကျိန်းသေအခြေခံတိုးတက်အောင်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုစတင်တည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ပြီးတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောအရာတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေသည်။ အစဉ်အမြဲကဲ့သို့, ဒီဖြစ်ပျက်သည့်အခါကျွန်တော်အကြောင်းသင်ပြောပြရန်ကဒီမှာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းများမှကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှော်လင့်ရသနည်း။